रक्सी पिउने मामिलामा भने बिहे गरेपछि महिला झनै अल्लारे बन्छन्
24625 पटक पढिएको
के तपाईलाई थाहा छ ? विवाहित महिलाले बढि रक्सी पिउँछन् ! सामन्यतया नेपालीमा साधारण घरायसी प्रयोगमा पिइने नशालु पदार्थलाई रक्सी भनिन्छ। तर आजको यो विश्वव्यापीकरणको युगमा उक्त परिभाषा एकदमै साघुरो हो । आजकल थरिथरिका विभिन्न ब्रान्डका प्रसिद्ध रक्सीहरु नेपालमा पनि पाइन्छन । रक्सीको सेवन प्राचीनकालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा भइरहेको पाइन्छ । यसलाई विभिन्न परिस्थिति र समयमा विभिन्न उपनाम जस्तै: सोमरस, अङ्गुरको छोरी इत्यादिले पुकारिन्छ । आजको बदलिंदो सामाजिक र आर्थिक परिस्थितिको कारण व्यक्तिको रहनसहन तथा खानपिनमा परिवर्तन आएको छ । रिक्सा चलाउने मजदुरदेखि उच्च ओहदाको अधिकृत र राजनीतिज्ञले समेत रक्सीको आनन्द लिइरहेको हुन्छ ।